Neymar Jr oo markii ugu horreysay ka hadlay fashilkii ku yimid heshiiskii uu dib ugu laaban lahaa Kooxda Barcelona – Gool FM
(Paris) 15 Sebt 2019. Xiddiga kooxda kubadda cagta Paris Saint-Germain ee Neymar Jr ayaa markii ugu horeysay kala hadlay saxaafada fashilkii ku yimid heshiiskii uu markale dib ugu laaban lahaa Barcelona.
Neymar Jr ayaa wuxuu si cad u xaqiijiyay inuu doonayay inuu ka tago kooxda Paris Saint-Germain, laakiin wuxuu iska diiday inuu wax faahfaahin ah ka bixiyo fashilka ku yimid wada hadalada labada dhinac.
Neymar Jr ayaa afka furtay kaddib guushii ay kooxda Strasbourg kaga gaareen horyaalka France Ligue 1, isagoo dhaliyay goolka kaliya ee ciyaarta ka dhashay wuxuuna yiri:
“Qof walba wuu ogyahay inaan doonayay inaan baxo, si fiican ayaana arrintaas u sheegay waana ku cel celiyay, laakiin kama hadli doono faahfaahinta”.
“Hadda waxaan ahay ciyaaryahan Paris Saint-Germain ah waana inaan soo bandhigaa wax walba oo garoonka dhexdiisa ah”.
“Doorkayga waa inaan soo bandhigo wax walba ee garoonka dhexdiisa ah taasina waa waxa aan sameyn doono xilli ciyaareedka oo dhan, waxaan noqon doonaa mid faraxsan”.
“Rikooradeyda ugu fiican ee xirfadeyda kubadda cagta waxaan ku sameeyay Paris Saint-Germain”.
“Laakiin nasiib darro, labadii xilli ciyaareed ee la soo dhaafay waxaa i soo maray dhawacyo dhawr ah, waxaana seegay kulamo badan oo muhiim ah, laakiin marka aan garoonka ku jiro, wax walba oo aan haysto ayaan sameeyaa, wax badana waan ku guuleysanay”.